Maxay yihiin dib u habboon oo loogu talagalay profile xooggan oo xiriiriye ah?
Qodobkan waxaa loogu talagalay inuu kaa caawiyo fahamka asaasiga ah mid ka mid ah midka ugu muhiimsan ee farsamada casriyeynta raadinta mashiinka raadinta.
Backlinks ayaa lagama maarmaan u ah abuuridda ganacsi wanaagsan oo joogitaan online ah. Webmasters iyo kuwa isku xirayaasha ayaa si joogta ah uga doodaya hababka loo helo sida loo helo xiriirrada galmada, sida loo abuuro muuqaal ahaan, iyo sida loo helo fursado dhisme oo tayo sare leh. Waxyaabaha waa in aad ubaahan tahay inaad abuurto tayada tayada iyo dabeecada organic iyada oo laga fogeynayo ganaaxyada raadinta raadinta. Waxaad u baahan tahay inaad daryeesho awoodda iyo sumcadda ilaha webka laga helo meelaha aad isku xiraysid maxaa yeelay waxay u sheegaysaa makiinadaha raadinta ee ku saabsan sumcadda boggaaga. Xiriirradaada soo galaya waxay go'aamiyaan darajada boggaaga, taasina waa sababta ay dhismaha xiriirku u noqonayaan qayb muhiim ah ee suuq-geynta iyo raadinta makiinadaha raadinta.
Maanta waxaannu diirada saari doonaa dib u celinta iyo sababta ay u cayaarayaan doorka hoggaanka ee bogga.
Maxay yihiin dib u eegis?
Backlink waa hyperlink ka yimaada hal goob. Waxaa jira laba nooc oo ah dhabarka dambe ee dofollow iyo nofollow. Xidhiidhada Dofollow waa kuwa aan ubaahanahay nuucyada xiriirinta. Xidhiidhyadani waxay leeyihiin qiime u ah ilaha webka ee ku xiran qaabka loo yaqaan "juice link. "Goolasha Google waxay u kala qaybsanyihiin dib-u-celin iyo ka sarreeya darajo looxiray. Nofollow backlinks waa in sidoo kale lagu dhejiyaa profile-kaaga si aad u muujisid Google in aad ku xirto ilo webi oo kala duwan oo keliya maahan in la helo juice juice. Xidhiidhyadani waxay leeyihiin nofollow tag iyo ha u gudbin wax qiimo leh ilaha la xariira. Looma arki karo gawaarida raadinta iyo sida caadiga ah, ma raaci karaan dadka caadiga ah. Waxay si fudud u adeegsadaan calaamad muujin. Si kastaba ha noqotee, haddii aad haysato hab sax ah oo ku saabsan ololaha dhismahaaga isku xiran, waxaad awoodi doontaa inaad beddelid dib udhexaadin ah oo aad la socoto.
Sababta dib u noqoshada ay ugu adeegto shuruudaha heerka Google?
Marka Google u falanqeynayo xiriirka ku tilmaamaya boggaaga, wuxuu ku qiimeeyaa qiimaha goobtaada iyada oo leh awoodda shabakadda websaydhka. Google ayaa soo jiidata iyada oo ah cod bixin bogga internetka. Haddii codbixintu ay ka imanayso goobta la tixgeliyo, waxay si wanaagsan u saameyn kartaa heerka bogga iyo waliba haddii codka uu ka yimaado spamka, ilaha webka tayada hooseeya, waxay si xun u saameyn doontaa goobtaada SEO.
Guud ahaan, nidaamka dhismaha caadiga ah wuxuu u egyahay sidan: "Haddii ilaha webka ee gaarka ah ay tixgeliyaan qodob content ah oo qiimo leh oo ku filan oo isku xiran, iyo ilahaasina waa mid si fiican u shaqeynaya, websaytka ku xiran waa inuu ahaado website wanaagsan oo sidoo kale ".
Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad tixgaliso istiraatiijigaaga dhabarka
Si aad u sameysid qariirad tilmaaneed oo tayo leh, waxaad u baahan tahay inaad fiiriso tayada website-kaaga jeclaan lahaa in la dhiso xiriiro. Taasi waa sababta ugu hooseysa ee ololaha dhismahaaga xiriiriyaha aad u baahan tahay inaad sameysid cilmi-baaris dhamaystiran suuqa oo aad ka heshid ilaha webka oo qiimo leh. Xulashada ugu fiican waxay tahay in lala xiriiro bogagga internetka ee bogga iyo blogs ee ku haboon warshadahaaga.
Mid ka mid ah siyaabaha ugu fiican ee dib loo helo waa marti marti ah. Waxaad si sahal ah dib ugu heli kartaa boggagaaga adigoo galinaya xiriirka boostadaada. Nasiib darro, waxyaabo badan oo spammy ah oo ku wareegsan farsamada dhismaha xidhiidhkan ayaa la dhajiyay martiqaadka sumcadda. Sanadkii 2012 Google ayaa cusbooneysiiyay cusboonaysiinta Penguin kaas oo burburiyay liiska bogagga internetka ee isticmaala farsamooyinka dhismaha ee isugeynta.
(3) Ereyada u muuqda dabiiciga qoraalka oo aan si sax ah loola jeedin erayga muhiimka ah.
Aag aan ku haboonayn magacaaga calaamadda.
Magaca maqaalka aad ku tilmaameyso.
Halkii aad ku qarin lahayd gadaashaada adoo adeegsanaya qoraal SEO ah, waxaad siisaa akhristayaashaada macluumaad dheeri ah si ay u fahmaan sababta ay u baahan yihiin si ay ula socdaan xiriirkaaga iyo sida ay uga faa'iideysan karaan Source .